ဖွဈနိုငျရငျ . . . ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးပါနဲ့ တဈခါတညျး မပေ့ဈလိုကျပါ – Shinyoon
လူတဈယောကျကို မုနျးတယျဆိုတာ ကိုယျ့စိတျထဲ နရောပေးနခွေငျးတဈမြိုးပါပဲ ။ ငါ သူ့ကို မုနျးလိုကျတာဆိုတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ တဈဖကျမှာ သတိတရတှေ ရှိခငျြရှိနတေတျတာလေ ။
ဖွဈနိုငျရငျ . . . ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးပါနဲ့ မုနျးတယျဆိုတာ ကိုယျအရငျပငျပနျးရတဲ့ အလုပျပါ ။ တဈခါတဈလေ တဈဖကျက ကိုယျမုနျးနတေဲ့ အကွောငျးတှေ သိခငျြမှ သိပွီး သူကပွုံးလို့ ပြျောလို့ ကိုယျ့မှာသာ အမုနျးတှနေဲ့ ပူလောငျနရေတာတှလေဲ ရှိပါတယျ
ငါ သူ့ကို မုနျးလိုကျတာ ဆိုတာကတညျး စိတျထဲမှာ နရောတဈနရော ပေးထားလိုကျတာမြိုးပဲလေ ။ သူ့ကိုသာ သတိတရရှိမနရေငျ သူ့ကိုလဲ မုနျးဖို့ သတိရနစေရာအကွောငျးမရှိတော့ဘူး မဟုတျလား ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျကို ကိုယျ့ဘ၀ထဲက မလိုအပျတော့တဲ့အခါ အပွီးအတိုငျ မပေ့ဈလိုကျတဲ့နညျးကိုပဲ သုံးပါ ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးပါနဲ့ ။
လူတဈယောကျ ဘ၀မှာ ပြျောအောငျနတေတျဖို့ဆိုရငျ နှလုံးသားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထားတတျဖို့လိုတယျ လိုအပျတဲ့အရာတှကေော မလိုအပျတဲ့အရာတှကေော အရာအားလုံးစုပုံပွီး စိတျထဲ နှလုံးသားထဲ ထညျ့ထားတဲ့အခါ လူဟာ သာမနျထကျ ပိုပွီး ပငျပနျးရပါတယျ ကိုယျ့ဘ၀အတှကျ အမှိုကျဆိုရငျ မွနျမွနျရှငျးထုတျပဈလိုကျ အကွာကွီးသိမျးမထားနဲ့ ကိုယျ့အတှကျ ပူလောငျစမေယျ့အရာတှဆေိုရငျ စိတျထဲ အကွာကွီးသိမျးမထားနဲ့ ခပျမွနျမွနျလေး မပေ့ဈလိုကျ ။
ခဈြခွငျး မုနျးခွငျးတှကွေားမှာ နှလုံးသားဟာ အရမျးကို အလုပျမြားရပါတယျ ခဈြခွငျးဟာ သိမျမှသေ့လောကျ မုနျးခွငျးဟာ အရမျးကို ပူလောငျရတယျ မဟုတျလား လူတဈယောကျကို မုနျးလိုကျတာလို့ အကွိမျကွိမျတှေးနခွေငျးတှထေကျ ခပျမွနျမွနျမပွေီ့း ခေါငျးထဲက ခပျသှကျသှကျထုတျလိုကျတဲ့အခါ ပူလောငျရတာ ပငျပနျးရတာ သိသိသာသာလြော့သှားလိမျ့မယျ
ဘ၀မှာ ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့ ဂရုစိုကျတဲ့လူတှေ တဈယောကျမှ မရှိဘူးဆိုရငျတောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျ ဂရုစိုကျ ကွငျနာတတျရတယျ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါလို့ ဘယျလိုပဲ ပွောပွော တကယျတမျးလြှောကျရတဲ့ အဲ့ဒီ တိုပါတယျဆိုတဲ့ဘ၀က ထငျထားတာထကျ ပိုပွီး ကွာခငျြကွာနတေတျတာလေ
အမုနျးတှေ သယျမသှားနဲ့ အာဃာတတှေ မထားနဲ့ ကိုယျ့ဘ၀နဲ့ ကိုယျ ကိုယျ့စိတျနဲ့ကိုယျ အေးခမျြးအောငျနတေတျဖို့ လိုတယျ ဒီလူက ကိုယျ့ဘ၀အတှကျ အမှိုကျဆိုတာမှနျးသိရငျ တဈခါတညျး မပေ့ဈလိုကျတော့ ။ ကိုယျ့အပျေါမကောငျးမှနျးသိလာတဲ့အခါ ဝေးဝေးကနပေဲ ရှောငျခဲ့ရှားခဲ့တော့ စိတျအလေးခံပွီး ငါ မုနျးလိုကျတာဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပငျပနျးအောငျ မနှိပျစကျရဘူးလေ ။
ဖွဈနိုငျရငျ . . . . ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးပါနဲ့ ။
လူတစ်ယောက်ကို မုန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ နေရာပေးနေခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ။ ငါ သူ့ကို မုန်းလိုက်တာဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တစ်ဖက်မှာ သတိတရတွေ ရှိချင်ရှိနေတတ်တာလေ ။
ဖြစ်နိုင်ရင် . . . ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါနဲ့ မုန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အရင်ပင်ပန်းရတဲ့ အလုပ်ပါ ။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဖက်က ကိုယ်မုန်းနေတဲ့ အကြောင်းတွေ သိချင်မှ သိပြီး သူကပြုံးလို့ ပျော်လို့ ကိုယ့်မှာသာ အမုန်းတွေနဲ့ ပူလောင်နေရတာတွေလဲ ရှိပါတယ်
ငါ သူ့ကို မုန်းလိုက်တာ ဆိုတာကတည်း စိတ်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာ ပေးထားလိုက်တာမျိုးပဲလေ ။ သူ့ကိုသာ သတိတရရှိမနေရင် သူ့ကိုလဲ မုန်းဖို့ သတိရနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး မဟုတ်လား ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ဘ၀ထဲက မလိုအပ်တော့တဲ့အခါ အပြီးအတိုင် မေ့ပစ်လိုက်တဲ့နည်းကိုပဲ သုံးပါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါနဲ့ ။
လူတစ်ယောက် ဘ၀မှာ ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ဆိုရင် နှလုံးသားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထားတတ်ဖို့လိုတယ် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကော မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကော အရာအားလုံးစုပုံပြီး စိတ်ထဲ နှလုံးသားထဲ ထည့်ထားတဲ့အခါ လူဟာ သာမန်ထက် ပိုပြီး ပင်ပန်းရပါတယ် ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အမှိုက်ဆိုရင် မြန်မြန်ရှင်းထုတ်ပစ်လိုက် အကြာကြီးသိမ်းမထားနဲ့ ကိုယ့်အတွက် ပူလောင်စေမယ့်အရာတွေဆိုရင် စိတ်ထဲ အကြာကြီးသိမ်းမထားနဲ့ ခပ်မြန်မြန်လေး မေ့ပစ်လိုက် ။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းတွေကြားမှာ နှလုံးသားဟာ အရမ်းကို အလုပ်များရပါတယ် ချစ်ခြင်းဟာ သိမ်မွေ့သလောက် မုန်းခြင်းဟာ အရမ်းကို ပူလောင်ရတယ် မဟုတ်လား လူတစ်ယောက်ကို မုန်းလိုက်တာလို့ အကြိမ်ကြိမ်တွေးနေခြင်းတွေထက် ခပ်မြန်မြန်မေ့ပြီး ခေါင်းထဲက ခပ်သွက်သွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ပူလောင်ရတာ ပင်ပန်းရတာ သိသိသာသာလျော့သွားလိမ့်မယ်
ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက် ကြင်နာတတ်ရတယ် ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါလို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော တကယ်တမ်းလျှောက်ရတဲ့ အဲ့ဒီ တိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဘ၀က ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ကြာချင်ကြာနေတတ်တာလေ
အမုန်းတွေ သယ်မသွားနဲ့ အာဃာတတွေ မထားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် အေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့ လိုတယ် ဒီလူက ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အမှိုက်ဆိုတာမှန်းသိရင် တစ်ခါတည်း မေ့ပစ်လိုက်တော့ ။ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းမှန်းသိလာတဲ့အခါ ဝေးဝေးကနေပဲ ရှောင်ခဲ့ရှားခဲ့တော့ စိတ်အလေးခံပြီး ငါ မုန်းလိုက်တာဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပင်ပန်းအောင် မနှိပ်စက်ရဘူးလေ ။
ဖြစ်နိုင်ရင် . . . . ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါနဲ့ ။